Dalalka Turkiga, Qadar & Libya oo ku heshiiyey inay iska kaashadaan dhanka daafaca (Turkiga oo saldhig wayn ku yeelanaya Libya) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dalalka Turkiga, Qadar & Libya oo ku heshiiyey inay iska kaashadaan dhanka...
Dalalka Turkiga, Qadar & Libya oo ku heshiiyey inay iska kaashadaan dhanka daafaca (Turkiga oo saldhig wayn ku yeelanaya Libya)
(Tripoli) 19 Agoosto 2020 – Turkiga iyo Qadar ayaa heshiis 3-geesood ah oo iskaashi ciidan ah la saxiixday dowladda Libya, si ay iskaga kaashadaan daafaca ciidamada Xaftar.
Heshiiskan oo uu shaaciyey Wasiir Xigeenka Gaashaandhigga Libya, Salam Al-Namroush, ayaa waxaa ka mid ah in saldhigyo ciidan iyo xeryo tababar oo uu wehliyo saldhig ay leeyihiin Ciidanka Badda Turkiga laga furo magaalada Misrata.
Waxaa sidoo kale talooyin dhanka amaanka ah la siin doonaa ciidamada Libya, iyadoo uu Turkigu ballan qaaday inuu Libya u dhisayo ciidan rasmi ah.
Waxaa heshiiskan la gaarey kaddib markii ay Libya booqdeen kaddibna kulmeen Wasiirka Gaashaandhigga Turkiga, Hulusi Akar, dhiggiisa Qadar, Mohammad Al-Attiyah, iyo RW Libya, Fayez Al-Sarraj oo ay wehliyaan wasiirro kale oo ka tirsan xukuumadda GNA.
Wuxuu heshiiskani dhacayaa jeer uu Tripoli sidoo kale joogo Wasiir Dibadeedka Jarmanka, Heiko Maas, oo booqasho aan la sii shaacin halkaa ku tegey, isagoo sheegay inuu Dowladda GNA la yeelanayo wada hadallo ku aaddan sidii lagaga bixi lahaa wax uu ku tilmaamay “xaalad halis ah,” jeer ay dalkaa ka jiraan dagaallo daba dheeraaday.
Previous articleXafiisyadii Wasaaradaha Maaliyada, Dekedaha iyo Furdada ee Dekedda Boosaaso oo korontadii laga goostay kaddib markii….
Next articleGOOGOOSKA & GOOGOOSKA: Lyon vs Bayern Munchen 0-3 (Bayern oo PSG ballansatay)